मेवा नाम एक गुण अनेक , जानीराख्नुहोस् यसका औषधीजन्य फाईदाहरु – Jagaran Nepal
हाम्रो गाउघरमा सजिलै उपलब्ध हुने एक फलको नाम हो मेवा र यसको फल मात्र होईन यसको पात पनी निकै उपयोगि हुनेकुरा प्रमाणित भैसकेको छ । जानौ आज मेवाको सम्पूर्ण जानकारीहरु:
मेवाको बिउमा उपलब्ध पोषण तत्वले कलेजोमा लागेको सिरोसिस भन्ने रोगबाट सहजै छुटकारा दिलाउँछ । सिरोसिस भन्ने रोग अत्यधिक र’क्सि सेवन बाट हुन्छ । मेवाको ५-६ वटा सुकेको बिउ लिनुहोस् र यसलाई सिलौटोमा पिन्नुहोस् ।
अव यो धुलोलाई कागतीको रस सहितको एक ग्लास पानी वा जुसमा मिसाएर दैनिक एक महिना सम्म सेवन गर्नुहोस् । सिरोसिस रोग आपसेआप निको भएर जान्छ । मेवाको बिउ सेवन गर्नाले कलेजो बलियो हुनुका साथै कलेजोमा कुनै पनि प्रकारको सं’क्रमण हुनपाउँदैन ।
मेवाको बिउ सेवन गर्नाले शरीरमा सं’क्रमण हुन पाउँदैन र यसले फुड प्वाइजनिङ जस्तो समस्यालाई सहजै नाकाम बनाउँछ । यसको सेवन गर्नाले ज्वरो समेत लाग्न पाउँदैन ।
मेवाको बिउ सेवन गर्नाले शरीरमा कयान्सरको कोशिका र ट्यूमर बिकसित हुनपाउँदैन । मेवाको बिउमा प्राप्त गुणले कोलन, स्त’न, फोक्सो, ल्युकेमिया र प्रोस्टेट क्यान्सर रोगहरुको बि’रुद्धमा काम गर्छ ।
२. मेवाको बियाँमा जि’वाणु प्रतिरोधी गुण हुन्छ । मेवाको बियाँ पिँधेर घाउमा लगाउँदा घाउमा थप सं’क्रमण हुन दिदैन र घाउ छिटै निको हुन्छ ।
औषधिय गुडयुक्त्त मेवाले के के रोग निको पर्छ ?
काँचो मेवाको दूधमा गिलसिरिन मिसाएर जिब्रोमा विहानरवेलुका दल्ने गरे केही दिनमा ठिक हुन्छ ।
काँचो मेवा ताछेर नियमित दिनमा ४र५ टुक्रा सेवन गर्ने गरेमा अल्काई बढ्न पाउँदैन र निको हुँदै जान्छ ।
काँचो मेवाको टुक्रा पकाएर पानीले गारगल गरेमा २र३ दिनमा ठिक हुन्छ ।
जलनशिलविरुद्धका इन्जाइम हुने भएकाले यसले दुखाई कम गर्न मद्दत पुर्याउछ, खासगरी आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस भएका बिरामीमा यो लाभदायीमानिन्छ । यसमा क्यान्सरसंग ल’ड्ने क्षमता पनि हुन्छ ।
१६. र’जस्वला अनियमित भएकोमा
भाले लंगुरमा गरिएको एक अध्ययनले मेवामा ग’र्भनिरोधक क्षमता पनि भएको पाइएको छ। त्यसैले पुरुषले मेवा प्रयोग गरेको अवस्थामा सहवास भएकामा तत्काल ग’र्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ।
शरीरको इम्यूनिटीलाई बढाउनुका साथै मेवाको पातको जूसले शरीरमा व्याक्टेरियाको उत्पादनलाई रोक्नमा पनि मद्दत गर्छ । यसले रगतमा सेतो रक्त कोषिका ९व्हाईट व्लड सेल्स० र प्लेटलेट्सलाई पनि बढाउनमा मद्दत गर्छ ।
मेवाको पातमा क्यान्सरसँग ल’ड्ने गुण हुन्छ । जसले इम्यूनिटीलाई बढाउनमा मद्दत गर्छ , र सर्भाइकल क्यान्सर, स्तन क्यान्सर जस्ता क्यान्सरका कोषहरुलाई उत्पन्न हुनबाट जोगाउँछ ।